University of Bayreuth Yokuxhumana
Ungakhohlwa xoxa University of Bayreuth
Bhalisa at University of Bayreuth
Siyakwamukela ku-University of Bayreuth. Ukucabanga futhi ezisebenza nasemhlabeni wonke ifune okungaphezu kuka nje kokuba omunye iyunivesithi ezikhanga kakhulu eBavaria futhi athatha izikhundla eziphezulu ekufundiseni kazwelonke kanye rankings ucwaningo. Ngokwalesi sizathu, siye samisa tekutfutfukisa ngonyaka 2020 ukuze kuqhutshekwe engaloli University of profile Bayreuth oyingqayizivele emaphethelweni yokuncintisana:
Ngenxa array yayo ezihlukahlukene eyala futhi osendaweni abakhethwe focus izindawo, University of Bayreuth is wonke amazwe omhlaba ngeqhaza layo ucwaningo kanye unikeza Ukutadisha imvelo omuhle.
The University of Bayreuth ingenye izindawo okuholela eJalimane mayelana nesifundo imvelo yayo kanye nezinga abafundi bayo.
The University of Bayreuth kuyinto naphakathi iyunivesithi okuyinto uzibophezele ezindinganisweni eziphakeme zemfundo ephakeme kanye okuyinto eye wenza umzamo oqotho uzibekele ahluke emanyuvesi ezinkudlwana.
Njengoba omunye emanyuvesi omncane kunabo bonke yaseJalimane, siyakwazi ukusebenza in an engachemile, Umoya uyazethemba senkululeko academic, inqubekela-phambili yesayensi, kanye nesibopho emphakathini. Ngokuhambisana nombono wethu, izinto eziza kuqala kithi abaphambili kube nokuqondisa ngabanye, ngokulondoloza izindinganiso eziphakeme academic, nokudala izinhlelo yokutadisha ukuthatha ukucwaninga okwenziwayo manje ku-akhawunti. Sigxile imikhakha eyahlukene kanye ukusebenzisana ezintsha phakathi eziningi eyala yethu yizimpawu ezimqoka Bayreuth sika isiko ucwaningo.
Uma sibheka emuva, kuba manje kwacaca ukuthi oqondileyo emuva ku 1975 ukusungula a enyuvesi esekelwe esihlanganisa ezindaweni strong ngendaba ucwaningo imikhakha eyahlukene kanye nokufundisa. Imibuzo ezibhekene nomphakathi wethu wonke omhlaba iya ngokuya eziyinkimbinkimbi ngokwengeziwe. I izimpendulo kwesokudla ingatholwa ngokusebenzisa close, ukubambisana cross-izigwegwe - one of kwempahla main yeNyuvesi. The University of Bayreuth libhekene inkululeko academic, inqubekela-phambili yesayensi, nokuhlobana ezingokoqobo, konke okuyizinto ziqondwa esimeningcondvo nesibopho emphakathini kanye namasiko.
Siyakwamukela ku lethu eyodwa-of-a-uhlobo campus.
Kuyinto kokubili inhliziyo University kanye mthombo. Kulapho ubungane zenziwa, ngokubambisana isiqalisile, futhi nemibono ekhulelwa, nokuqinisekisa ukuthi enyuvesi yethu uhlala beacon emisha. exchange Scientific inzuzo kakhulu kusukela ezihlukahlukene eyala campus yethu yokuxhumana kuletha ndawonye. Yilokho Cishe ukuthi kungani University of Bayreuth oye wakwazi ukugubha imiklomelo eminingi kangaka nodumo ngoba lokho okufezile yezazi.
... Futhi Bayreuth liphakathi nendawo. Njengoba ebalelwa nxazonke 73,000, Bayreuth ingenkulu ikakhulukazi, kodwa lokho kuyisici esisodwa yezinto okwenza kube esikhangayo kangaka. Abantu iyangena komunye nomunye. Leli dolobha angase abe edumile emhlabeni we-opera umkhosi waminyaka yonke yayo, kodwa futhi inikeza abafundi nabacwaningi ingcebo ezikhangayo zamasiko kanye wobuciko, Wagner eceleni. Akufanele kube yisimanga ukuthi leli dolobha phathi futhi pub izigcawu angathí nyaka ezandleni abafundi. Kodwa uyobe umangale indlela wena okwazi ukuthola indlela yakho nxazonke lapho ubona imingcele phakathi campus futhi edolobheni isikhungo ayisasebenzi futhi kancane ebonakalayo. Lokhu kungase kube ngenxa nje yokuthi ngemva kwesikhashana nje kukhona engimaziyo on wonke amagumbi.
Scenic northern Bavaria, kwesokudla qathatha Bayreuth sika, mkhulu zemidlalo: ekubuyiseleni, izintaba, intaba-ekhuphuka, Canoeing, kude, eqhweni zonke izindlela ezinhle kakhulu ekucebiseni isikhathi sakho sokungcebeleka. Nokho, uma ziyenzeka ukufisela bazizwa umuzi ekudlwana manje bese, Nuremburg kumane nje ihora elilodwa ngesitimela away and Munich kuyinto kuphela 2 ½ ema-awa away. Ungakwazi ukufinyelela zonke eBerlin ngo 4 amahora ngemoto, Leipzig eyingxenye yaleso sikhathi. Futhi ungakhohlwa: ngokuba e elaseYurophu kusho Prague ubuye kuphela okuyindawo eqhele ngamahora amathathu-ngemoto.
Mathematics, Physics kanye Computer Science
Biology, Chemistry kanye Earth Sciences
Izilimi nezincwadi zokufunda
Uyafuna xoxa University of Bayreuth ? Noma yimuphi umbuzo, imibono noma ukubuyekezwa
University of Bayreuth kumephu
Izithombe: University of Bayreuth Facebook ezisemthethweni
University of Bayreuth Izibuyekezo
Joyina ukuxoxa University of Bayreuth.